Orinasa mpamokatra silikona Silika any Shina | SJJ
Ny latabatra malama, latabatra ambony latabatra na lovia foana no mahatonga ny fiainantsika ho maoderina sy kanto, ny morontsiraka silikôlôma dia tonga lafatra mba hiarovana ny latabatrao, ny latabatra ambony latabatra ary ny lozika amin'ny hafanana sy hamandoana. Ary ny morontsiraka silika dia mitazona ny takelaka, kaopy, vilia baolina ary bokotra vita amin'ny fototra mafy, azo antoka ary tsy mihetsika ...
Ny latabatra malama, latabatra ambony latabatra na lovia foana no mahatonga ny fiainantsika ho maoderina sy kanto, ny morontsiraka silikôlôma dia tonga lafatra mba hiarovana ny latabatrao, ny latabatra ambony latabatra ary ny lozika amin'ny hafanana sy hamandoana. Ary ny morontsiraka silika dia mitazona ny takelaka, kaopy, vilia baolina ary bokotra misy fotony mafy orina sy tsy azo antoka. Ny morontsiraka silikônina dia vita amin'ny fitaovana silicone avo lenta izay sariaka, tontolo iainana ary tsy misy poizina. Malemy sy maharitra ny fitaovana, miloko sy manjelanjelatra ireo logo, ka azo ampiasaina na aiza na aiza na aiza na aiza ny sôkôra silibika ho fanomezana fampiroboroboana, fanomezana ara-barotra na tanjon'ny hafa. Ny endrika mahazatra dia boribory sy toradroa, fa ny ekipanay matihanina dia afaka mamorona ny endrika arakaraka ny volavolanao, ary ny loko azo amboarina ihany koa. Ireo mpiorina amin'ny silikola dia maneho tsara ny hevi-dehibe sy ny hevitra avy amin'ny mpamorona, ny fikambanana na ny mpanangom-bola.
Teo aloha: Saron'ny rakotra satroka silika
Manaraka: Mpihazona karatra silika